Emechara ọrụ na Melet Bridge na Ordu | RayHaber
HomeTurkeyBlack Sea Region52 ArmyMmecha nke Melet Bridge na Ordu
16 / 11 / 2019 52 Army, General, hyperlinks, Black Sea Region, Ụzọ Awara Awara, Turkey
dechara melet akwa n'ime ndị agha
Mmecha nke Melet Bridge na Ordu; Site na ebumnuche nke Obodo Obodo Ordu, a rụzuru àkwù mmiri ọhụrụ ahụ n'akụkụ Osimiri Melet na mpaghara Altınordu nke Ordu, azụ nke okporo ụzọ na mpaghara Oke Osimiri Ojii nke Oke.
Agụta ụbọchị nke mbụ nke ozi ọzọ akwa Corum Samsun Merzifon Ankara ejikọta Turkey isi iga netwọk na ụzọ gasị dị ka ohere anụ ụlọ Turkey Caucasus mba, Turkish Republic, Central Asia, Russia, na Republic of ọtụtụ n'ógbè na district ọrụ inye.
“NWA ọhụrụ ga-emeghe njem”
Afara ohuru ohuru a gha aghaghi ibelata nsogbu okporo uzo nke anakpo ogbe na okwa nke Ordu Metropolitan Mayor Dr. Mehmet Hilmi Güler kwuru, ıyla A rụchara ọrụ ndị a site na asphalting nke akwa mmiri ọhụrụ. 1166. 1366. na 1356. njikọ okporo ụzọ dị n'okporo ụzọ dị ka ọnọdụ ihu igwe kwesịrị ekwesị ma rụọ ọrụ na ebe ndị ọzọ na-enwe ọganihu nke àkwà mmiri ọhụrụ ọzọ ga-emeghere maka okporo ụzọ. Njikọ akụkụ na isi okporo ụzọ yana ọrụ njikọ ụzọ ga - agwụ agwụ n'oge dị mkpirikpi. Ogologo xNUMX, 236 mita obosara nke akwa ahụ arụchara ọ bụghị naanị maka mpaghara anyị, kamakwa ógbè ndị gbara ya gburugburu na mpaghara ga-ebelata ibu okporo ụzọ ruo na oke.
N'elu Àkwà Mmiri wuru dịka Ihe ọzọ na Melet Bridge…
Ihe omumu ihe omumu nke 1915 nke kaleanakkale…
70 dị na Njikọ Ọkụ ebe puku ụgbọala na-agafe Gün
Minister Turhan: Selde na Ordu, "8 na akwa Adet anyị
Ọdụdọ Ordu Car 9 100 Na - eme Ọtụtụ Ndị njem Otu Ụbọchị
Na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè Nurdağ
Ọrụ Gaziray Na-arụ Ọrụ Mee Ngwa
Ọrụ Amalite Mevlana malitere